यति धेरै संख्यामा खुल्यो सरकारी जागिर, यस्तो छ अवसर ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > रोजगार > यति धेरै संख्यामा खुल्यो सरकारी जागिर, यस्तो छ अवसर !
यति धेरै संख्यामा खुल्यो सरकारी जागिर, यस्तो छ अवसर !
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाँचौँ तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । आयोगले एक हजार १५२ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन आह्वान गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका चारवटा मन्त्रालय र विभिन्न जिल्लाका ६२ स्थानीय तहमा रिक्त रहेका स्थानमा कर्मचारी माग गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पाँचौ तहका लागि खुल्लामार्फत ५३८, ज्येष्ठतातर्फ ४०७, कार्यक्षमतामार्फत १९६, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ नौ र कार्यसम्पादनमार्फत दुई जनाको पदपूर्ति गरिने उनले जानकारी दिए ।
यसअघि पहिलो पटक चौंथो तहका ४६९ कर्मचारी माग गरेको आयोगले दोस्रो पटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागेको हो । यसअघि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको माग फारामका आधारमा चौथो तहमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले गत मङ्सिर आठ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।
आयोगले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा ३६ र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाबाट ३६ गरी प्रशासनिक तथा प्राविधिकतर्फ चौथो तहमा ८१ जना पदपूर्ति गर्ने तथा खुलातर्फ ३८८ सहित महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित तथा अपाङ्गता भएकासमेत रहने गरी चौथो तहको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
२०७७ पौष १५ गते ११:४८ मा प्रकाशित
भर्खरै लोकसेवा आयोगको परीक्षा संचालन शाखाले जारी गर्यो अत्यन्त जरुरी सूचना
तेस्रो मुलुकसँग पनि व्यापार सम्झौता : गाैतम